Indlela yokuqala ukubungaza
Ukubhalisa ikhaya ku-Airbnb akuve kulula futhi ungakwenza ngendlela oyifisayo. Usalelwe izinyathelo ezimbalwa zokuthola imali nokufinyelela izigidi zezivakashi zomhlaba wonke.
Lawula indlela obungaza ngayo
Bungaza noma kunini lapho ufuna
Asikho isikhathi esincane noma esiyisibopho okufanele usibungaze, ngakho-ke ungavimba izinsuku lapho ungatholakali. Ungakwazi futhi ukusetha imithetho emayelana nokutholakala kwakho, okuhlanganisa: • Ubusuku obuncane/obuphakeme isivakashi esingabuhlala • Izivakashi zingakwazi ukubhukha kude kangakanani enkathini ezayo • Kudingeka isaziso sangaphambilini ngaphambi kokubhukha
Setha amanani ozizwa kahle ngawo
Uthola ithuba lokukhetha amanani akho obusuku, futhi amathuluzi ethu okubeka amanani angakusiza unqume. Ungakwazi futhi ukwengeza imininingwane engokwezifiso efana: • Namanani okuhlanza • Izaphulelo zeviki • Amanani akhethekile ezikhathi ezithile zonyaka
Funda ngokwenza imali ku-Airbnb
Hlela ngokushesha amakhalenda
Ukuze ugweme ukubhukhwa uma ungakwazi ukubungaza noma unokubhukha okukhona kakade, ungaxhuma ikhalenda lakho le-Airbnb namanye amakhalenda akho. Lokhu kukuvumela ukuthi ugcine wonke amakhalenda esesikhathini ngokuzenzakalelayo.
Sungula imithetho yesikhala sakho
Ukuze usethe okungase kulindelwe, ungakwazi ukwengeza Imithetho Yendlu izivakashi okuzofanele ziyivume ngaphambi kokubhukha. Uma isivakashi sephule umthetho ngemva kokubhukha, ungakhansela ukubhukha ngaphandle kwenhlawulo.
Ukuqalisa bekulula kunalokho okulindelekile.
Isiqondiso sokukusiza ukuthi usethe
Njengoba wakha indlu yakho, sizokubuza imibuzo izivakashi ezifuna ukuyazi lapho zibhukha. Uzochaza indlu yakho, unikeze imininingwane emayelana nokuthi yini ekhethekile mayelana nendlu, okuhlanganisa nezinto eziphecelezi ongazilindela.
Amacebiso phakathi nendlela
Uma unenkinga yokubhukhwa, sizokunikeza izeluleko ngamanani, amasethingi, nokunye ukubuyekezwa okungakusiza ekutholeni ukubhukha ngokushesha. Futhi ababungazi abanolwazi Besigungu sethu Sabanikazi Bezindlu nabo bangakwazi ukufaka isandla.
Izigidi zezivakashi zomhlaba wonke
Uma usuqede ukufakwa kwendlu yakho ohlwini, izivakashi ezivela kuyo yonke zingakwazi ukuthola indlu yakho emiphumeleni yosesho. Kukhona cishe izivakashi ze-Airbnb ezibalelwa ezigidini ezingu-2 ubusuku ngabunye futhi sinamathuluzi okukusiza ekutholeni ukubhukha okusebenzela wena.
Funda ukuthi i-Airbnb ikusiza kanjani ukuthi uthole izivakashi ezinhle
Thola ukwesekwa kokubungaza
Izinsiza kuyo yonke indawo
Njengombungazi, umphakathi we-Airbnb uhlezi ukhona ukuze ukusize. Ukuze uthole amacebiso awusizo neziphakamiso, uzothola I-Help Center enamandla, ababungazi abangu-375,000 Kusigungu sethu Sabanikazi Bezindlu, kanye namakhithi amathuluzi okubungaza amaningi.
Sikhona imini nobusuku ukusiza 24/7
Iqembu lethu lomhlaba wonke lilindile 24/7 ukukusiza ngocingo, i-imeyili, nokubhalelana imiyalezo. Iqembu lingakusiza ngayo yonke into kusuka ezinkingeni zokwakha indlu yakho kuye ekukhathazekeni ngezivakashi.
Bangaphezu kwezigidi ezingu-2 abantu ababungazayo ku-Airbnb futhi asikho isitayela sombungazi esifanayo.
Funda ukuthi yini elindelekile kubabungazi
Ukubhalisela i-Airbnb nokufaka ikhaya lakho kumahhala. Lapho uthola ukubhukha, sikhokhisa imali yesevisi ye-Airbnb yababungazi, ngokujwayelekile engu-3%, ukusiza ukukhokhela izindleko zokuqhuba ibhizinisi.
Uma isivakashi siphula omunye Wemithetho Yendlu oyibekile noma sikwenze wazizwa ungaphephile ngezenzo zabo, ungakwazi ukunqaba isicelo sabo sokubhukha noma ukhansele ukubhukha. Ngaphambi kokuba wamukele ukubhuka sinezindlela ezihlukahlukene zokuhlola ukuze siqikelele ukuthi uthola izivakashi ezifanelekayo. Noma kunjalo, ungasenqaba isicelo sokubhuka futhi lokho ngeke kube nemiphumela emibi emiphumeleni yokucingwa kwendlu yakho. Ngemva kokuthi wamukele ukubhukha Uma usukwamukelile kakade ukubhukha, ungakwazi ukukhansela. Kungase kudingeke uhlawule ngokukhansela uma kungekho Mthetho Wendlu ophulwe yisivakashi.
Yisiphi isivikelo enginaso ngomonakalo wendlu?
Isiqinisekiso Sokubuyiselwa se-Airbnb sihlinzeka ngokuvikelwa okufika ku- $1,000,000 kumbungazi ngomonakalo wendlu evikelwe esimweni esingajwayelekile somonakalo wesivakashi odlula ngale imali ekhishwa uma isivakashi senze umonakalo noma uma ingekho imali ekhishwa uma aisivakashi senze umonakalo.
Uhlelo Lwesiqinisekiso Sokubuyiselwa aluvikeli ukheshi, izibambiso, izinto eziyigugu, imisebenzi yobuciko eyivela-kancane, amatshe ayigugu okuhloba, izilwane ezifuywayo noma isikweletu sakho. Situsa ukuthi ababungazi bavikele noma basuse izinto eziyigugu lapho beqashisa ngendawo yabo. Uhlelo futhi aluhlanganisi ukulahleka noma ukulimala kwempahla ngenxa yokuguga nokugqwala kwento ngokusetshenziswa.
Funda kabanzi mayelana nesiQinisekiso Sokubuyiselwa ku- [http://airbnb.com/guarantee](/guarantee